Savannah မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းလေကြောင်း, GA လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
ငါ့ကိုအနီးတတ်နိုင်ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Savannah ဂျော်ဂျီယာလေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 404-662-4200 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ဧရိယာထဲမှာဗလာခြေထောက်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအနီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု 404-662-4200 oneway လေယာဉ်ပျံခရီးသွားနှုန်းသည်. အများအပြားငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီများကော်ပိုရေးရှင်းကဏ္ဍအတွက်တတ်နိုင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Chartered ရှိပါတယ်ပူဇော်ကြသည်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏အထင်ရှားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်. သင်တယောက်ကိုတယောက်အရပျမှပျံသန်းကြသောအခါ / ဒါဟာအားလုံးနှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်အပေါ်ပါပြီသောသူတို့အားရွေးချယ်ရာတွင်အကြောင်းနှင့် client ကိုလိုအပ်ပါတယ်အရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရှိလုံခြုံဖြစ်သွားကြသည်ကိုသိရန်လိုခငျြ.
တကယ်တော့, အလုပ်အမှုဆောင်ဇိမ်ခံဂျက် Chartered သူတွေကိုတောင်မှအသေးစားနှင့်အလတ်စားစကေးစီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိများကဤခရီးစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်ဒီရက်အတော်လေးတတ်နိုင်ဖြစ်လာကြပါပြီ. Savannah အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုသီးသန့်ငွေရတတ်သောသူနှင့်ကျော်ကြားသောအဘို့သိုထားကြသည်. သို့သော်ဤမရှိတော့အမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်. airfare များ၏မကြာခဏလက်လှမ်းကုန်ကျစရိတ်ခုတ်လှဲခဲ့ကြ, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်ဖို့ပိုကလူအားဖွင့်.
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပျံသန်းမှုအမျိုးမျိုးသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိ, အချို့သောလေကြောင်းလိုင်းများ၏အပြောင်းအလဲမြန်စွမ်းဆောင်ရည်ကနေထွက်ခွာ delay လုပ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းတင်းကြပ်လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းအထိ. လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားလည်းတင်းကျပ်များမှာ, သငျသညျခငျြအခါတိုင်းဒါကြောင့်သင်ပျံသန်းမနိုင်. တကယ်တော့, အချို့နေရာများသာတစ်ပတ်လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ, ဒါကြောင့်ခရီးသွားများအတွက်ကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနှင့်သူတို့ကလက်လွတ်မသေချာအောင်ရန်ရှိသည်. သင် ... နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့အချိန်တွေအများကြီးယူမယ်လို့.
ငှားရမ်းလေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်ကယ်ဆယ်ရေးမှကြွလာဘယ်မှာဤသူကား. ဒါဟာအများဆုံးဇိမ်ခံအိမ်များနှင့်ရွက်လှေအတွင်းပိုင်းထက်ပိုပြီးအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကအလွန်အမင်းဇိမ်ခံအခန်းသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးကိုတက်မြိန်လိမ့်မည်. ကံမကောင်းသဖြင့်, သင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲပေါ်တွင်သင်၏ရည်ရွယ်ဦးတည်ရာမှမဆိုရရှိနိုင်လေယာဉ်မျှမရှိစေခြင်းငှါ. တကယ်တော့, သာထိုလမ်းကြောင်းပျံသန်းလေကြောင်းလိုင်း၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ဖြစ်သူတို့ကတဦးတည်းပျံသန်းအသီးအသီးရှိစေခြင်းငှါ,, အရာအများစုကတနင်္ဂနွေကာလအတွင်းသို့မဟုတ်တနင်္လာနေ့လည်းကောင်းဖြစ်ကြသည်.
သင်သည်အဘယ်သို့လိုအပ်တစ်ဦးအစာရှောင်သည်, စည်းစိမ်ကြီသော, သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရရန်နှင့်လုံခြုံလမ်း. ဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာ Chartered အားဖွငျ့ဖွစျသညျ. အကြီးမားဆုံးအဆင်ပြေသင်ည TSA ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အများပြည်သူလေဆိပ်ပေါ်မှာတကျွန်းသူနှင့်အတူသင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်ချိုးမတိုးမြှင့်ရှောငျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုနှင့် ပတ်သက်. လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအများအပြားဒဏ္ဍာရီရှိပါတယ်ပေမယ့်, ယနေ့လူကဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mode ကို၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လာကြ. သင်တစ်ဦးအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်ယူပြီးတဲ့အခါသင်မှတ် B ကိုမှအမှတ် A ကနေရနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေလိုလျှင်ဒါဟာအပန်းဖြေင်, အဲဒီအကြောင်း go ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးသွားဘွတ်ကင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Savannah, Pooler, ဂျော့တောင်း, Daufuskie ကျွန်း, Hardeeville, Bloomingdale, Tybee ကျွန်း, Okatie, Richmond ဟေးလ်, Rincon, Bluffton, Meldrim, ဧဒင်ဥယျာဉ်, ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်း, Fleming က, Ellabell, Guyton, တစ်ဝက်တစ်ပျက်, Springfield, Tillman, Ridgeland, Co. , watchie မဟုတ်, ဆိပ်ကမ်းတော်ဝင်, ဝိန်း Fort Stewart က, Pembroke, Beaufort, clyo, Dale, Lady ကျွန်း, Hinesville, Brooklet, Riceboro, Allenhurst, Pineland, Garnett, စိန့်ဟယ်လီနာကျွန်း, Walthourville, Sheldon, Seabrook, Townsend, မှာ Oliver, Newington, Furman, Scotia, လခြမ်း, Lobeco, ဒီဂရီမျဉ်း, daisy, Ludowici, Yemassee, Sapelo ကျွန်း, အစောပိုင်းဌာနခွဲ, Statesboro, Estill, Claxton, Darien, Hagan, Glennville, စာရင်း, ဒိုဗာ, Varnville, Bellville, အစိမ်းရောင်ရေကန်, Luray, Manassas, Hampton, Pulaski, Gifford, Edisto ကျွန်း, Jesup, Sylvania, Crocketville, Miley, portal, Jacksonboro, Brunson, Collins, Reidsville, ကျောက်တောင် Ford ကား, Brunswick, Islandton, Metter, Cobbtown, Fairfax, Odum, Walterboro, စိန့်ဆီမွန်ကျွန်း, အဒမ် Run ကို, Ruffin, ဟောလိဝုဒ်, ပင်လယ်ပြင်ကျွန်း, Wadmalaw ကျွန်း, Garfield, Screven, round အို, Hortense, Ravenel, Cottageville, Millen, Johns ကျွန်း, Perkins, သာဒိ, Offerman, ပက်, Charleston, Nahunta, မြောက်အမေရိက Charleston, Charleston လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, Hoboken Savannah / ဟီလ်တန်ဌာနမှူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ပိုင်အများပြည်သူနှင့်စစ်ရေးအသုံးပြုမှုကိုလေဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် https://savannahairport.com/